कुनै कुने मानिस किन भाग्यमानी हुन्छन् ? – bampijhyala.com
Home > अन्तराष्ट्रीय > कुनै कुने मानिस किन भाग्यमानी हुन्छन् ?
कुनै कुने मानिस किन भाग्यमानी हुन्छन् ?
१ मंसिर २०७७, सोमबार १६:३० bampijhyala
तर मानिसको भाग्य राम्रो वा नराम्रा भन्ने कुरा हुदैँन । मनोविज्ञ रिर्चड वाइजमनका अनुसार मानिसहरूले राम्रो हुन् वा नराम्रो आफ्ना भाग्य आफै कोर्छन् । वाइजमनले भाग्यको भूमिका र मानिसहरूको जीवनमा त्यसले पारेको प्रभावबारे अध्ययन गरिराखेका छन्। उनले त्यसलाई ‘वैज्ञानिक अनुसन्धान’ भनेका छन् जसले आफूलाई भाग्यमानी र भाग्यमानी नभएको ठान्नेहरूबिचको भिन्नता हेरिराखेको छ।
यसको निश्कर्ष के त ? भाग्य कुनै जादुयी क्षमता वा अप्रत्यासित नतिजा नभई यो हामी कसरी सोच्छौं र काम गर्छौं भन्ने हो। खासगरी, भाग्यमानी भनिने वा आफूलाई भाग्यमानी ठान्ने मानिसहरूले यी चार कुरा ठिकसँग गर्छन्।
नयाँ अवसरलाई सदुपयोग गर्नका लागि अन्तरआत्मालाई सुन्नुको अर्थ धेरै हुन्छ। भाग्यमानी मानिसहरू त्यसो गर्न धक मान्दैनन्। उनीहरूलाई केही कुरा ठिक लाग्यो भने त्यसमा ढुक्कैसँग विश्वास गरेर अगाडि बढ्छन्।
आशावादी मानिसहरूका रूपमा हेरिने भाग्यमानीहरू आफ्ना हरेक काममा सफल भइने सोच्छन्। ‘उनीहरू आफ्ना कामहरू राम्ररी हुने ठान्छन् र सोही धारणाले नै त्यो सजिलै पूरा भइदिए जस्तो हुन्छ’ वाइजमन भन्छन्।
यो गुणको प्रभाव यस्तो हुन्छ कि त्यसले अरू मानिसहरूलाई सहजै आकर्षित गर्छ। आफूलाई भाग्यमानी नठान्नेहरूमा भने निराशावादी सोच हावी भइदिन्छ।
त्योमध्ये एउटा ‘भाग्य डायरी’ बनाउनु र आफूलाई भाग्यमानी सोच्न थाल्नु पनि हो।
एउटा चुनावले ‘सत्यको क्षय’ लाई रोक्ने छैन : ओबामा
मेेरो जन्म घर दोलखा शहर !
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको लागि अनुमति माग्दै १ मंसिर २०७७, सोमबार १६:३०
हिलोन् नये व्यथा (फंगल इन्फेक्शन) गिनागु ? १ मंसिर २०७७, सोमबार १६:३०
थनु लुँय भाउ थिरकु १ मंसिर २०७७, सोमबार १६:३०
बाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेप नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुन बैंकको कति ? १ मंसिर २०७७, सोमबार १६:३०
प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दै १ मंसिर २०७७, सोमबार १६:३०